Serial မသုံးဘဲ Windows 10 ကိုအခမဲ့ download လုပ်နည်း Gadget သတင်း
Serial နံပါတ်ပါ ၀ င်သော Windows 10 ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
မနေ့က Windows operating system ကိုသုံးတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီ။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၅ နှစ်လယ်ပိုင်းမှစတင်မည့် operating system ၏အမည်အသစ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကောကောလာဟလများမဟုတ်ပါ၊ Windows 10 မှာတစ်ခု
အသစ်အဆန်းများစွာကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအချို့မှာလုံးဝထူးခြား။ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဖတ်ရှုအကြံပြုသောတူညီသည် ဒီ Windows 10 ကိုမင်းလက်ထဲမှာထားပြီးပြီဆိုရင်၊ ဒီဆောင်းပါးကဒီဆောင်းပါးကသင့်ကို Serial နံပါတ်ပါတဲ့ဒီ operating system ဗားရှင်းအသစ်ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
1 Serial နံပါတ်ပါသော ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
2 Windows ကိုတပ်ဆင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများ 10
Serial နံပါတ်ပါသော ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က၎င်း၏ကြေညာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်မနေ့ကကြေငြာခဲ့သည် မည်သူမဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးသစ်များကိုသူတို့စမ်းသပ်ပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ operating system (Windows 10) ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့် Microsoft မှအဆိုပြုထားသောလိုင်စင်ပေါ်လစီများကိုလက်ခံပြီးလေးစားသရွေ့၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှမရှိပါ။ ထို့နောက် Windows 10 ကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရှိလူများမှရရှိသောအမှတ်စဉ်နံပါတ်ဖြင့် Windows XNUMX ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သင်အနည်းငယ်ဆင့်ကဲအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
သင်၏ Microsoft အကောင့် (များသောအားဖြင့် Hotmail နှင့် Outlook.com ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါ။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့သက်ဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများဖြင့်လော့ဂ်လုပ်ပါ။
ယခုတရားဝင်၏ website ကိုသွားပါ Microsoft Insider.
ထို့နောက် Microsoft မှအဆိုပြုထားသော Windows 10 အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ပေါ်လစီကိုလက်ခံရန်သင့်အားဖိတ်ကြားလိမ့်မည်။
နောက် ၀ င်းဒိုးတွင်ဝင်းဒိုး ၁၀ ဒေါင်းလုပ် ၀ င်းဒိုးသို့သွားရန်ခွင့်ပြုမည့်အောက်ခြေရှိအပြာ (အပြာ) link ကိုနှိပ်ပါ။
မှအောက်ဆုံးမှ ဦး Windows 10 ရဲ့ ISO image ကိုရွေးပါ သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်စိတ်ဝင်စားကြောင်း။
ထိပ်ဆုံးတွင် 10 ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်သုံးရမည့်နံပါတ်စဉ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားရန်သင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုထဲသို့ကူးယူပြီးကူးထည့်ရမည်။
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယင်းကိုရရှိလိမ့်မည် Windows 10 ISO ပုံရိပ်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်; ယခုခေတ်တွင် Microsoft ၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဤစမ်းသပ်ဗားရှင်းအတွက်ဘာသာစကားအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားများ (စပိန်အပါအ ၀ င်) ကိုတရားဝင်အဆိုပြုရန်အချိန်ယူရမည်။
ISO ပုံရိပ်၏ခန့်မှန်းအလေးချိန်သည်3GB ထက်ပိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဖိုင်ကိုသင် download လုပ်သည့်နေရာတွင်နေရာလွတ်ရှိရမည်။
Windows 10, 8.1 နဲ့7ကို ISO format နဲ့အခမဲ့ download လုပ်နည်း
Windows ကိုတပ်ဆင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများ 10
၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုဒေါင်းလုဒ်ချပြီးသည်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အညီဆက်လက်တပ်ဆင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အခြားနည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
Virtual operating system ။ သင်သည် virtual machine တစ်ခုဖန်တီးရန် application များစွာအနက်မှတစ်ခုကိုသင်အားကိုးနိုင်သည်။ သင်အရင် download လုပ်ထားသော ISO image (နှင့် serial number) ကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်။
dual- boot operating system ကို။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သီးခြား partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Windows 10 ကိုလည်းသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့် operating system ကိုသင်တပ်ဆင်မည့်ဤအခန်းကန့်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပေ။
ငါတို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒုတိယရွေးချယ်စရာအတွက်သင်လိုအပ်လိမ့်မည် ISO image ရှိအရာအားလုံးကို USB stick တစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ၌ disc tray မရှိပါက။ ဤကိစ္စမျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် အထူးကိရိယာတခုကိုအသုံးပြုပါကျနော်တို့ပင်ယခင်ကပြောပြီခဲ့သော၏။
update ကို: ဒီဆောင်းပါးကို Windows 2014 ဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလမှာ ၂၀၁၄ မှာရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျပိုမို updated သတင်းအချက်အလက်ချင်လျှင် ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုထည့်သွင်းရန်ဒီဆောင်းပါးကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Serial နံပါတ်ပါ ၀ င်သော Windows 10 ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
Renzo Collantes Valer ဟုသူကပြောသည်
Renzo Collantes Valer အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် သို့သော်ခွင့်ပြုထားသောနံပါတ်သည်ကျွန်ုပ်၏တပ်ဆင်ခြင်းစစ်ဆေးမှုအားလုံး (Home and Enterprise) တွင်မည်သည့်အခါမျှမေးမြန်းခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်အပိုထပ်ဆောင်းအလှူငွေတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
သူကငါ့ကို faaa အတွက် windows 8.1 activation license တွေပေးတယ်
Juan Chirinos ဟုသူကပြောသည်
Juan Chirinos ကိုပြန်ပြောပါ
စပိန်ဘာသာတွင်အထုပ်မရှိသေးပါ၊ သို့သော် MIcrosoft သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖိုင်အဖြစ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အထုပ်တစ်ခုအဖြစ်သေချာပေါက်အဆိုပြုမည်။ အထွေထွေ ၀ င်းဒိုးအတွက်ဖော်ပြချက်ကိုတင်ပြရန်တင်ပြထားသည်မှာ ၀ င်းဒိုးသည်အချိန်နှင့်အမျှ Windows7သို့လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Juan Pablo Chirinos ဟုသူကပြောသည်
သင့်ရဲ့ကြင်နာသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Rodrigo ရိုးရိုးလေးပါ။
Juan Pablo Chirinos ကိုပြန်ပြောပါ
ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ပျူတာအတွက်အန္တရာယ်ရှိသလား။ beta နဲ့ test ဖြစ်တာသိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတရားဝင်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးခိုးကူးခွေမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါက simulator မဟုတ်ဘဲဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် disk partition ကိုအပေါ် Windows 10 ကို install လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ သင့်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျနော့်မေးခွန်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ Linux နဲ့ dual boot ရှိရင် w10 boot ကသင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါက beta အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သလား၊ ငါဒီအဆင့်ရှိမယ်လို့ထင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Windows7Ultimate, Windows 8.1 Pro နှင့် Windows 10 ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Startup Manager တွင်ရွေးချယ်စရာ ၃ ခုပေါ်လာသည်။ bootloader အတွင်း Linux ကိုဘယ်လို resonate လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ သင်ပြောတာမှန်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ Windows ကအဲဒါကိုပျက်စီးစေတယ်။ သင်၏အမှု၌၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် Linux သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ဆုံး၌တပ်ဆင်ထားသည်၊ သို့မှသာ၎င်း၏မန်နေဂျာအောင်မြင်လိမ့်မည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Linux တွင်အထူးပြုသူတစ် ဦး ကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
မာ့ခ် ... ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတွန်းအားပေးရန်မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သူနှင့်အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက Windows 10 ကသင့်ရဲ့ Graphic Card ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ငါ့အမှုအတွက်ပြproblemနာမရှိဘူး၊ 1920 × 1080 px မှာပြproblemနာမရှိဘူး။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်မှတ်ချက်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
JR Marklin ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Windows 8.1 W10 ကို install လုပ်လို့ရသလားဒါမှမဟုတ် format လုပ်ဖို့လိုတယ်
JR Marklin အားစာပြန်ပါ
စမ်းသပ်ဗားရှင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုဘယ်တော့မှမွမ်းမံပါ သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးစေရန် (hard disk ၏အခန်းကန့်ကို Windows disk manager) ဖြင့် ဖန်တီး၍ Windows 10 ကို install လုပ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ၎င်းကိုသင် virtual machine တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်၊ မထိရောက်ဘူး ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အလည်အပတ်ခရီးနှင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာ GNU / Linux မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပထမ ဦး စွာ Windows သည် bootloader ကိုသုံးသည် (၎င်း၏အတိုကောက်မမှတ်မိပါ။ - GNU / Linux) သည်အခြားသူများကိုအသုံးပြုသည်။ Windows မန်နေဂျာသည် GNU / Linux နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ရှိပြီးသားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၎င်း၏မန်နေဂျာသည် GRUB ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ဖြန့်ဖြူးမှု၏အစမှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ GRUB ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်သောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Windows ကိုပထမ ဦး ဆုံးတပ်ဆင်ပြီး၊ ထို့နောက် GNU / Linux ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
Windows 10 မှာ၊ ငါ install မလုပ်ပါဘူး။ Windows 8.1 မှာ resolution နဲ့ driver ပြသနာတွေရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်မတည်မငြိမ်အသစ်တစ်ခုနဲ့ငါဘယ်လောက်ထပ်ပြီးငါထပ်ပြီးဖြေရှင်းမှာလဲ။
JJ, သင်၌ Windows 8.1 ရှိပါက Skype Translator ကိုသုံးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်အခြားတိုင်းပြည်မှသူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် installer ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့စတင်တယ်။ Grub ကိုနှိမ်နင်းနိုင်လျှင်၎င်းကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ EasyBCD ။
ကျွန်ုပ်၏ ၂၀၀၇ Dell Inspiron 6400 လက်ပ်တော့ (2007GB နှင့် SSD) သည်ရိုက်ချက်တစ်ခုနှင့်တူမည်ဟုထင်ရသည်။ W4 ယင်ကောင်။
pernida dilia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်အခမဲ့ install လုပ်ပြီးပါက၎င်းသည် validation key ကိုရိုက်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၌မရှိပါ
dilia pernida အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်သောမေးခွန်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် 7-bit windows 32 computer (ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် 64-bit ကိုထောက်ပံ့သော်လည်း) ကျွန်ုပ်သည် windows 10 သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို 32-bit အပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ ငါပေးဆောင်ခြင်းထက်အခြားနည်းလမ်းများ, Windows 10 64-bit ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ရနိုင်မလား? ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်မှာမူရင်းဖြစ်သည်
Rodrigo, ငါဘယ်လိုစုံစမ်းမေးမြန်းမှုမျိုးရှိပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မရှိသော်လည်းမိုက်မဲသူလည်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာများရှိပါသည်။ သင်အဖြေပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Asus စက်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကို Windows7operating system နဲ့စပိန်ဘာသာနဲ့ Windows 10 ကို update လုပ်လိုက်တယ်။ ခင်ဗျားမှာစက်မှာ operating system တစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာငါဖတ်ဖူးလား။ အဲဒါကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ disk ကိုမည်သည့်အရာမျှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲမည်သို့ခွဲခြားနိုင်သနည်း (ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများစသဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့၌ operating system ရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်အဆင်မပြေမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အများကြီး
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းအချိန်တွင်မွမ်းမံခြင်းပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည် iso potable ဖြစ်သော pendriver တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုချန်လှပ်ပါကလိုင်စင်တောင်းခံပါကသို့မဟုတ်၎င်းကိုချန်လှပ်ထားပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းစက်ကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
Ricardo Rivera အားပြန်ပြောပါ
ဒီစီးရီးကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုအခြားနည်းလမ်းတစ်ခု (သို့) keygen ပေးသလား။
ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စကားဝှက်ကကျွန်တော့်ကိုမပေါ်ပါဘူး။ MediaCreationTool သာပေါ်လာလိမ့်မည်။
သူကငါ့ကိုကူညီပေးတယ်ငါ windows 10 အတွက်သော့တစ်ချောင်းလိုတယ်
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသက်သာစေမည့်နည်းလမ်း ၁၀ ချက်
ယူရို ၁၀၀ အောက်သာဝယ်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်း ၇ လုံး